Niverina nivavaka anaty fepetra ny mpino katolika | NewsMada
Niverina nivavaka anaty fepetra ny mpino katolika
Miverina tsikelikely amin’ny fotoam-pivavahana eny anivon’ny paroasiny tsirairay ny mpino katolika eto Toamasina amin’izao fiatrehana ny fihibohana izao. Anatin’ny fananjana tanteraka ny fepetra napetraky ny fanjakana amin’ny hamehana ara-pahasalamana avokoa anefa izany. Eo ny fanasan-tanana amin’ny rano sy ny savony na ny « gel ». Ny fanaovana sarontava sy ny elanelana iray metatra, mandritra ny fotoam-pivavahana. Nezahin’ny isaky ny paroasy ny hamitana ny sakrameta rehetra tokony ho natao nandritra ny fetin’ny Paska. Anisan’izany ny batemin-jazamenavava sy ny kominio voalohany ary hatramin’ny fanamasinana ny fanambadiana. Na izany aza anefa, tena sarotiny ny pretra sy ny kardinaly Tsaharazana Desiré ny amin’ny tsy maintsy hanarahana ireo fepetra rehetra.
Tsy manasa olon-kafa na manao fety be any an-trano…
Anisan’izany ny tsy fahazoana manasa olon-kafa hamonjy ny fotoam-pivavahana na koa ny fanaovana fety hisian’ny fanangonana olona maro any an-tokantrano. Anton’izany ny hisorohana ny mety ho fiverenan’ny fiparitahan’ny valanaretina indray eto Toamasina. Samy mametraka ny lamina ho amin’izany amin’ireo kristianina avokoa ny paroasy tsirairay manoloana ny fandehanana any am-piangonana. Hita taratra, ny alahady teo, fa mitovitovy
avokoa ny fandamianana natao isam-piangonana. Ahitana fitsinjarana amin’ny ora fidirana
isaky ny kartie eny anivon’ny paroasy. Anisan’izany ny ao amin’ny Ste Louis de Mont Fort, etsy Tanamakoa. Intelo niditra, nanomboka tamin’ny 6 ora sy amin’ny 8 ora, ary amin’ny 10 ora. Hatrany amin’ny indimy miditra kosa izany ho an’ireo fiangonana maro kristiniana.